Baranas karatti hafnaa ree? – Wiirtuu Odeeffannoo Muslimtoota Oromiyaa
(Warroonni Oromiyaaf Jecha Wareegamtan Rabbi Jannata Isiniif haa hiru)
(Warroonni Miidhamtan Rabbi Hatantamaan isin Nuuf haa fayyisu)
(Warroonni Qabsoo finiinsaa jirtan Rabbi isin bira nuuf haa jiraatu)
Muti Oromoonnii erga abboonni keenna falmii diddaa gabrummaa eegalan irraa kaasee, bifa adda addaatiin mormuu keenna itti fufuu irraa duubatti hin deebine. Falmii baroota dheeraa dura taasifamaa tureen bu’aan heddu akka argame wal nu hin gaafachiisu, haa ta’u malee sababa adda addaatiin guutumaan guututti mirga keenna kabajchiisuu hin dandeenne!
Barattonnii fii dargaggooni, akkasumas beeytonni Oromoo walumaa galatti hawaasni Oromoo, kan Oromummaa isaatiif quuqamu guyyaa irra guyyatti akka ajjeefamaa yookaa hidhamaa jiran cufti keennaa homa waliin beeynuudha. Mootummaan abbaa irree kan waan maalummaa keenna sirritti nu barate itti fakkaate, sadarkaa tokko tokkoon guuree ajjeesuu irra dabree, guutummatti lafa keennaa irraa nu dhabamsiisuuf karoora baafate gara hujiitti hiikuu hanga eegale bubbule jira.
Yeroo gochaa isaa kan sanyii duguuggii kana hubatee argetti Sabni Oromoos ciisee gadadoo booyuu qofa osoo hin taane, karaa seera qabeessaan hiriira mormii taasisuun sagalee isaa dhageessisaa turee jira ammas dhageessisuu irraa duubatti hin deebine. Ni yaadanna yoo taanee mormiin Barattoota Oromootiin taasifamaa ture kumuu hanga ammaatti takkallee deebii argatee hin beeku, kuni immoo tuffii fii karoora addaa kan mootummaan abbaa irree qabu irraa kan ka’eedha.
Tuffiin Mootummaan nurraa qabu, gargar faca’uu keennaa erraa kan ka’e maal na godhan, maal fidanii yoo tahu karoorri inni kaayyatee ittiin socho’u, yeroo mormiin kumuu ka’e namoota I’ijoo, barattoota Sadarkaa guddaa irra jiraniif abbootii qabeenyaa kan Dhalootaan Oromoo tahan irratti tarkaanfii seeraan alaa fudhachuun isaan karatti hambisuun Saba Oromoo guutumaan guututti Kolaasuudha.
Karoora isaa kanatti akka milkaayu Kan taasisu, waa heddutu jira, sanniin keessaa warraaqsa qabsoo qabsiifnee Karatti dhaabuu keenna, akkuma argaa jirtan Warraaqsi tibbanaa yeroo dheeraadhaaf waan itti fufaa jiruuf jijjiirama guddaa mul’isee jira, haa ta’u malee yoo akkanaan itti fufnee mirga keenna guutumaan guututti harkatti kan hin deeffanne taate, baranallee akkuma baroota dabranii Lubbuu teennallee itti dhabnee karatti laamshofnee hafna taha.
Yeroo ammaa kanattii Mootummaan Obboleewwan keenna, kan nuti gaafii tokko waliin kaafne tokko tokkoon funaanuu irratti argama, Nuti immoo dirqamni nurra jiru gadi baanee mormii hidhamuu namoota kanneenii dhageessisuu qabna. Fakkeennaaf No moonni biyyoota biroo yeroo beekaan takkii dura deemaan Isaanii Mootummaan irraa hidhame, hanga inni hiikkamutti asii hin gallu jechuun mormii isaanii itti fufu. Kanaafuu yeroo mootummaan nama Oromoof dubbatu tokko hidhu hidhame jennee usuu hin qabnu, sababiin isaas karoorri Mootummaa nu laamshessuuffi waan taheef. Kanaafuu jabaannee qabsoo teenna kallattii cufaan Osoo Addaan hin kutin haa finiinsinu Jechaa barreeffama kiyya As irratti goolaba.